Baaghi 2 – Page 7 – Filimside.net
Sajid Nadiadwala iyo Fox Star waxay rabaan Judwaa 2 lix bilood kadib Baaghi 2 inay Boxoffice-ka ku qabsadaan
March 25, 2018 Zakarie Abdi
29 September 2017 waa taariikhdii Judwaa 2 la daawaday kaasi oo Super Hit noqday 130 Crore ka badana soo xareeyay. 30 March 2018 waxaa masraxa la saari doonaa Baaghi 2 oo hadal heyntiisa aad u […]
Filimka Baaghi 2 wuu diyaarsan yahay hadal heyntiisana aad ayay u sareysaa waxaana la daawan doonaa Jimcadaan nagu soo fool leh. Baaghi 2 waxaa hogaamiyaal ka ah Tiger Shroff iyo gabadha lagu xanto Disha Patani […]
100-maalmood kadib markii Tiger Zinda Hai tiyaatarada wacdaro ka dhigan Baaghi 2 ayaa goobta qabsan doono
Tiger Zinda Hai iyo Baaghi 2 waxay ka siman yihiin inay yihiin filimo Action ah ah, heeso wacan leh, mada daalo dhameestiran leh sidoo kalena Boxoffice-ka holac ka kicin doonaan. 100-maalmood ka hor Mega Star […]
Muuqaal Labaad Oo Laga Soo Bandhigay Qaabka Filmka Baaghi 2 Dagaalkiisa Loo Sameyay Tiger Wax Yar Lama Imaan (+Video)
March 24, 2018 Ali Aadan
Filmka Baaghi 2 waxaa la daawan doona jimcahan nagu soo aadan oo ay taariikhda ku beegantahay 30 bisha maarso waana film si weyn loo wada sugaayo. Waaa filmka wada hogaaminayaan Tiger Shroff iyo Disah Patani […]
Tiger Shroff oo aad uga walaacsan Baaghi 2 madaama labadiisa filim ugu dambeeyeen Flop noqdeen
Atooraha dhalinta yar Tiger Shroff waxaa u diyaarsan filimka Action-ka ah Baaghi 2 oo la daawan doono 31-da bishan Maarso waana filim siweyn loo wada sugaayo. Tiger ayaa qirtay inuu aad uga walaacsan yahay filimkiisa Baaghi 2 […]
Rasmi: Heeska Ek Do Teen Ee Filmka Baaghi 2 Oo Lasoo Bandhigay Jacqueline In Badan Ayee Keentay Dance-gii Madhuri (+Video)
March 19, 2018 Ali Aadan
Atirishada Jacqueline Fernandez wey ka baxsatay sida ay u jishay dib u sameynta heeska caanka ah ee Ek Do Teen taaso Madhuri Dixit 90-maadki tiyaatarada daawadayaasha ugu soo jiidan jirtay. Sabtidi ayaa laga soo bandhigay […]
Tiger Shroff Iyo Disha Patani Oo Magaalka Xayeysiin Ugu Sameynayan Filmkoda Baaghi 2 (+Sawiro)
March 18, 2018 Ali Aadan
Tiger Shroff iyo Disha Patani ayaa wali ku guda jiraan xayeysiin usameynta filmkooda sida waalida ah loo wada sugaayo ee Baaghi 2. Baaghi 2 waa film dagaal ah sido kalena ah qeybta labaad ee filmka […]
Tiger Shroff Aad Ayuu Oga Xumaa Markuu Timahiisa Iska Jaraayey Baaghi 2 Dartiis (+Video)
March 17, 2018 Ali Aadan
Atooraha Tiger Shroff ayaa dhamaadka bishaan Maarso la imaan doono mashruucisa dagaalka ah ee Baaghi 2 kaaso ay atirisho ka tahay Disha Patani. Waxaan kaartooyinka, heesaha iyo goos gooska filmkaan ku aragnay in Tiger iska […]
Aragtida Kowaad Jacqueline Fernandez Heeskeda Ek Do Teen Ee Filmka Baaghi 2!
March 16, 2018 Ali Aadan
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay aragtida kowaad ee Jacqueline Fernandez muuqalada ay ku leedahay filmka Baaghi 2. Jacqueline ayaa filmkaan kuleh muuqaal marti ah waliba waxay ku leedahay heeskii caanka ahaa Ek Do […]
Hees Kale Oo Cusub Ayaa Laga Soo Bandhigay Filmka Baaghi 2 Markaana Waa Tiger Oo Jaceyl Jilaayo (+Video)
Maalmaha tirintooda ayaa lagu jiraa maadama 2 todobaad kadib la daawan doono filmka Baaghi 2 kaaso sugitaankisa dheeraaday. Tiger waxuu heli doona Hit-kiisa ugu weyn intii uu fanka kujiray sido kale waxaa filmkaan la wado […]